यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् ! गायक गायिकाको स्वर सुरिलो हुने कारणहरु
डिसेम्बर 27, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments गायक, गायिका, रुद्रघण्टी, स्वर
गायक गायिकाको स्वर सुरिलो हुने कारणहरु ! मानिसको आवाजले उसको व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सोच, शैक्षिक स्तर, संवेग लागायतका थुप्रै कुराहरु दर्शाइरहेको हुन्छ । आवाजमा हुने मिठासमा अरुलाई प्रभाव पार्ने क्षमता पनि हुन्छ । गीत संगीत प्राय: सवै मानिसलाई नै मन पर्दछ । झन् गायक गायिकाहरुको सुरिलो आवाजले त धेरै मानिसको मन जितेको नै हुन्छ । विशेषत गायकहरूको अत्यन्त सुरिलो स्वर हुने तर सबै मानिसमा यस्तो स्वर भने हुदैन । व्यक्ति पिच्छे फरक फरक स्वर किन हुन्छ त भनी बारेमा तल चर्चा गर्नेछौ ।
हामी सबैको घाँटीमा स्वर निकाल्ने यन्त्र भोकल कर्ड हुन्छ । यसमा १६ वटा लचिला मांसपेशीहरू हुन्छन् । तिनले झण्डै १७० किमिमका अवस्थाहरू प्रदर्शित गर्न सक्दछन् । आवाज निस्कनु भनेको हावाले ती मांसपेशीलाई चालाई कम्पन पैदा गर्नु हो । कम्पनको तौर तरिका अनुसार नै आवाज उत्पन्न हुन्छ । गाउनेहरूको स्वरयन्त्रको मुख्य विशेषता रिजोनेटिङ स्पेस अथवा स्वर घन्कने ठाउँ हो । उनीहरूमा यस्तो ठाउँ संगित उपकरणहरूको ढ्वाङगले जस्तै काम गर्छ । यसबाहेक गायक गायिकाहरूले आफ्नो स्वरलाई कसरी नियन्त्रण राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि सिकेका हुन्छन् ।
← तुलसीमा जल चढाउँदा हुने फाइदाहरु
डिप्रेसनको सजिलो उपचार →
2 thoughts on “गायक गायिकाको स्वर सुरिलो हुने कारणहरु”
Pingback:महिलाको स्वर सुरिलो हुन्छ भने पुरूषको धोद्रो, किन ? थाहा पाउनुहोस्
Pingback:गाडीमा यात्रा गर्दा कसैलाई किन बान्ता आउछ ?